Naaneys: Gaagaabyada Terminalka | Laga soo bilaabo Linux
Maxwell | | GNU / Linux, Kuwa kale, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Ma jiraan wax la mid ah terminal-ka, fudeydkiisa, wax-ku-oolnimadiisa iyo xawaarihiisa oo naga caawiya maalinteenna maanta xalliyo shaqooyinka aasaasiga ah ama xitaa adag, laga bilaabo magac bedelida noocyo badan oo faylal ah, ama xitaa maktabaddeenna muusikada loogu beddelayo qaabka vorbis. Dhammaantood waxay ku sameeyaan muddo ah waqti aad u yar marka loo eego dhiggooda garaafka ah.
Laakiin maxaan sameynaa markay tahay inaan sameyno xafid xaddiyo badan oo amarro ah?.
Aynu u fikirno sidii isticmaale celcelis ahaan: Waxay dareemi karaan inay aad uga adkaadeen xaddiga amarrada la adeegsanayo, kakanaanta kakanaanta iyo shaqooyinkooda kala duwan (iyo runta oo aanan eedeyn). Jaleecada hore waxyaabaha sidan oo kale ah dib ayey kuu soo tuuri karaan markaad bilowdo isticmaalka terminalka. Kaliya tiri waqtiyada aan maqalnay wax sida:
«Haye, sidee buu amarkaasi ahaa in kor loo furo fure USB-ga? Waan qaldamay oo kor ku xusan waxay i siisay qalad»
Ama akhri wax ku dhow lama huraan:
Iyo haddii aynaan haysan "xaashida khiyaamada" wanaagsan ee amarradeenna oo dhan ah, ama haddii ay taasi dhici weydo, xusuus wanaagsan, si dhib leh ayaan uga bixi lahayn. 100% qunsuliyadayada. Hadaad ubogto inaad isticmaasho terminal si xoogan, ma inkiri doontid kadib markaad qorto amarro aad u badan inay nagu wareeri karaan, oo xitaa naga careysiin karaan. Nasiib wanaag waxaan haynaa alias, waxaan qaadanay amar dheer oo balaaran waxaanan u xilsaarnay toobiye yar, oo loo soo gaabiyey, aadna uga sahlan in la xasuusto oo la qoro.
Tusaale ahaan, waxaan haynaa amarradan:
Xaqiiqdii way kuu dagdagi doontaa oo way kuu fududaan doontaa inaad sidan qorto:
Si tan loo sameeyo, waxa lagaa doonayo oo dhan waa inaad ka furto feylkaaga tifaftiraha qoraalka .bashrc (haddii aad u isticmaasho qolof sidii bashhadaad isticmaasho zhs way galaan .shshrc), oo ku dar wax sida:
Taasina maahan intaas, waxaan ku dari karnaa hawlo fara badan oo waxtar leh, laga bilaabo furfurista, dhageysiga muusikada si aan kala sooc lahayn diiwaanka, isku soo ururin, ogaanshaha taariikhda, xusuusiyeyaasha, u dhexeynta buugaagta iwm
Sidoo kale waa suurtagal in lagu daro midab iyaga oo adeegsanaya "echo" oo xitaa lala xiriiri karo dhacdooyinka dhawaaqa iyaga oo maraya mpg321 o og123.
Qaar ka mid ah tusaalooyinka aasaasiga ah ee hagaha hagaha:
In kastoo, in la sameeyo wax aad u adag, waxa ugu habboon ayaa noqon lahaa qor qoraal gooni ah, si aan aad looga dharagsanin feylkeena in badan .bashrc.
Ugu dambeyntii waxaan ka tagayaa qaar ka mid ah magacyadeyda shaqsiyeed, shaqsiyeed:
Oo ma haysaa wax magacyo ah oo wanaagsan oo aad wadaagto?
Laatiyeyaal wax ku ool ah
Tanna waxaan ku soo gabagabeyneynaa dib-u-eegidgan yar ee ku saabsan magacyada iyo isticmaalkooda, xusuusnow in haddii aad rabto inaad tirtirto magac kasta oo aad isticmaali karto loo yaqaan:
In meesha laga saaro magac kale.
Si aad uga saarto dhamaan magacyada .bashrc.
In kastoo, haddii midkood ku xadgudbo ay dhici karto inaad aakhirka illawdo amarrada dhabta ah (sideyda oo kale) sidaa darteed ugu fiican in aad si yar u isticmaasho.
Waxaan rajeynayaa in hadda haddii aad wax yar oo dheecaan ah ka heli karto boosteejooyinkaaga, hadda keydinta ugu yaraan waqti yar. Ku dadaal usbuuc wanaagsan, gadaal ayaan ka akhrisan doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Naaneysyada: Gawaarida gawaarida
Magacyada barakaysan ee noloshu waxyar noo fududeyneysa, waxay naga dhigaysaa caajis badan. xD
Inbadan ayaan haystay laakiin sidaad tidhaahdo, aakhirka waxaad aakhirka ilaawaysaa amarrada dhabta ah sidaa darteed imika waxaan u isticmaalaa xoogaa inaan dejiyo dookhyada.
Salaan iyo maqaal wanaagsan.
Isla waxbaa igu dhacay aniga ... waxaan kudhamaaday inaan ilaaway amarka, maxaa yeelay waxaan u isticmaalay magacyo waxkasta haha ​​...
Hadda waxaan kaliya u isticmaalaa mid si aan u buuxiyo ISO-ga iyo in aan codka ka soo saaro feyl fiidiyoow ah, laba shay oo aan marar dhif ah sameeyo
Salaan iyo maqaal wanaagsan 😀
Mahadsanid, waan ku faraxsanahay inay faa'iido laheyd.
Hadday run tahay qofku wuxuu ku dhammaanayaa inuu iloobo amarro badan oo dhab ah hahaha xD, waa sababta aan hadda ugu isticmaalo kaliya inaan ka tago sudo, waxaanan u maleynayaa inaanan waligey illoobi doonin midkaas.
In kasta oo haddii aan hilmaamay xoogaa amar 'apropos' ay tahay badbaado.
Waad dhisi kartaa cutub amar ah ^ __ ^ → https://lh4.googleusercontent.com/-aiKpcw5Fk0s/T1LDUJ_ZhLI/AAAAAAAADak/NWgjNeGWF-g/s800/debian_cubo_comandos2.png
yaa! Sidee xiiso leh, oo weyna yihiin goobahan, ma aanan aqoon iyaga.
Iyo xD, waxaan u arkaa inay jiraan googoyn xitaa emacs, laakiin waxba uma arko Chakra. Waxaan arki doonaa hadii aan sameeyo midna halkan ku wadaago.
Xaqiiqdii waxaan soo dhignay waqti ka hor halkan hehe: https://blog.desdelinux.net/cubos-comandos-para-distros-gnulinux/
bash-4.1 $ bisad .bashrc
sh / usr / bin / shaashadda-dev
alias ls = »ls -p –color = otomaatig ah
Taasi waa tan .bashrc xD
O_o TF WTF !!!
Wax badan ayaan adeegsan jiray magacyo, laakiin ma ahayn illaa heer aan iska illaawo amarradii asalka ahaa ... Runtii aad bay u faa'iido badan yihiin 🙂